Maitiro Ekuudza Kana Musikana Achikuda Iwe - 25 Zviratidzo Zvakajeka Iye Ane Kunzwa Kwako Iwe - Ukama
Maitiro Ekuudza Kana Musikana Achikuda Iwe: 25 Zviratidzo Zvakajeka Ari Mauri
Ndiwo mubvunzo uyo pasina mubvunzo wakapinda munenge mundangariro dzemurume wese pane imwe nguva muhupenyu hwake.
Mushure mezvose, ndeipi nzira iri nani yekudzivisa kurambwa pane kufunga kuti musikana anonzwa sei asati aratidza kudanana kwako?
Asi vakadzi dzimwe nguva vanogona kunyanyooma kufunga, kunyangwe patinofunga kuti tiri kuita kuti zvinhu zvive pachena kumukomana watiri.
Uye ngative vakatendeseka, imi varume hamusi vese vakuru pakuverenga zviratidzo nguva zhinji.
Kunyanya kana kutonga kwako kwakazara nemoyo midiki inoshambira pamberi pemeso ako kana iwe ukatarisa kune mumwe munhu waunofarira kwazvo.
Kunyangwe iwe uchimufarira uye usina chokwadi chekuti angati hongu kana iwe ukamubvunza kunze, kana kuti watove kunze, asi iwe hauna chokwadi kana achida kuita zvinhu, kuverenga musikana kunogona kunge kuri zvishoma yemugodhi.
Chinokosha ndechekutarisa kune mamwe maitiro uye zvimwe zvirevo zvinoratidza kukwezvana kwake kwauri.
Vamwe vanogona kunge vari vasinganzwisisike, nepo vamwe vachiganhurana nekutamba nerudo, asi heano mamwe zviratidzo zvekuzivisa kuti ari mauri.
1. Unomubata Akakutarisa
Kana tichida mukomana, tinozopedzisira tamutarisa zvakanyanya tingave tichida kana kwete, uye isu pamwe hatizove takanaka pakuzviviga. Kana iwe ukamutarisa uye ukamubata akatarisa, icho chiratidzo chakanaka.
Kana akakunyemwerera iwe paunosangana nemeso ako, kana kana akapindura kusekerera kwako nekunyemwerera zvakare, izvo zvinotonyanya kunaka. Kunyanya kana iri imwe yeaya anotapira, anonyara kunyemwerera inouya kana iwe wabatwa wakatarisisa.
Mushure mezvose, zvakaoma kuvanza manzwiro ako echokwadi panguva iyo iwe usati wagadzirira.
Kune rimwe divi, uye nekuti isu hatisi chinhu kana zvisiri zvinopesana, chimwe chiratidzo (kunyanya kana pasina chakaitika pakati pako izvozvi) ndechekuti iye haatombokutarisa.
Anozodzivirira kutarira kwako nekuti haadi kuve akajeka.
2. Uye Anokutsvagira
Kana akauya mukamuri uye achiziva kuti iwe uchave uripo, tarisa kuti uone kana maziso ake achikutsvaga paanosvika.
Kunyangwe kana akasasvikira kwauri uye achienda kushamwari dzake pachinzvimbo, chokwadi chaari kuongorora kuti uripo here chiratidzo chakanakisa, sezvo zvichireva kuti wave mupfungwa dzake.
Iko kudiki kwekutarisa kunoratidza kuti ari kuzvigadzirira pachezvake kwekudyidzana newe gare gare.
3. Anotanga Kubata Iwe Zvakasiyana
Kana iwe wakamuziva kwenguva yakati seshamwari uye akangoerekana avandudza manzwiro kwauri, iye anofanirwa kuve anoshamisa mutambi kuti amise maitiro ake kwauri kubva pakuchinja.
Dai iwe waive pedyo, hukama hune rudo pamberi uye iye anongoerekana amira kukubata iwe kana kutanga kukubata zvakasiyana nenzira yaanoita vamwe vakomana imi mose munoziva, chimwe chinhu chingangodaro chiri kumusoro.
Anogona kunge asingachanzwe akasununguka kuve ane hushamwari nekuti mumoyo make anoda zvimwe.
Anogona kuda kuve musikana wako, asi pane mukana wakanaka ari kunetsekanawo nekurambwa kana kuparadza hushamwari hwakanaka chose.
4. Anopindura Kumashoko Ako
Zvekare, izvi zvinosiyana kubva pamusikana kuenda kumusikana, asi kazhinji, kana tichida mumwe munhu, tichavaendesa meseji nekukurumidza.
Izvozvi kunze kwekunge iwe wapinda muiyo 'inotyisa' yekungopindura chete mushure memazuva matatu uye kunyepedzera kusafarira, mune iyo mamiriro anonamira kune izvo nekuti vasikana vazhinji havadi kuita senge 'vanofarira' mumwe.
Kunyangwe vamwe vanhu vachibudirira pamitambo iyi, vasikana vazhinji havana nguva yavo. Ukaramba uchitamba, anogona kuzotadza kufarira nekukasira, saka kuitira rudo rwamwari rega kumisidzana nekutumira mameseji kumashure.
5. Anoita Seanotyira
Paunotanga kusangana, anowana here rurimi rwakasungirirwa? Ari kunetseka here kuti auye nemisoro yekutaurirana?
Haanyatsoziva kuti anokukwazisa sei? Inofanira kunge iri kukwazisana here? Kumbundira? Kutsvoda padama? Kutsvoda pamatama ese ari maviri? Kana iye anongomira ipapo zvisina kunetseka?
Kana mukadzi achikuda, anove nemabhururu mudumbu rake paakatanga kukuona, uye izvo zvinogona kureva kuti huropi hwake hunotora zororo pfupi.
Iye anofanira munguva pfupi kuzorora mukati mekambani yako, asi yekutanga tsinga chiratidzo chechokwadi kuti ari kufarira.
6. Iye Anobata-anotya
Vamwe vasikana havana kugadzikana nekusangana neruzhinji, saka izvi hazviwanzo kushanda, asi kazhinji, kana ari mukati mako, anowana nzira dzekukubata iwe, kunyangwe zvangove zvidhoma zvidiki.
Kubata ruoko rwako zvechokwadi chinhu chakanaka, sezvo iri nemaune uye zvinoshamisa kushamwaridzana. Kana kuti anogona kutamba nerumwe rudzi rwemuviri senge sekutamba achirova iwe kana kutonyanya kunanga kana aine chivimbo uye achikwezva zvakanyanya kwauri.
7. Anoita Zvirongwa
Hapana chimwe chinhu chinoshatirisa sekusiyana kwemukomana waunoda pasina chero yakajeka pfungwa yekuti paunenge uchionana zvinotevera.
Kana asina kunetsekana nekukuona zvakare, angango chengeta zvinhu zvisina kujeka, asi kana achikufarira, anogona kuratidza mamwe mazuva kana nguva dzaakasununguka kune rimwe zuva.
Ita shuwa kuti unomutora kumusoro kweumwe wavo kana uchikwanisa uye nekuisa pasi chirongwa, kana iye angafunga kuti hausi kufarira kusangana zvakare uye enda kunze kwemota.
Kuva nehurongwa hwekumisikidza kunomupa simbiso yekuti achazokuona zvakare, uye zvinoreva kuti haafanire kumirira kuti iwe upe zano, iro rinogona kunetesa zvakanyanya.
8. Shamwari Dzake Dzinozvibata Zvakasiyana
Kana achikuda, mikana shamwari dzake dzinoziva zvese nezvazvo uye vanozoita nenzira dzinoratidza izvi.
Pamwe vanokusiya vaviri mega kana iwe uchisvika kwaari kana pamwe vanodonha zvishoma kana vachitaura newe.
Chero nzira, shamwari kazhinji dzinenge dzisinganyatsooneka nezve zvinhu kusvika padanho ravanopa zviratidzo zvakanaka kwazvo maererano nemanzwiro emusikana iye pachake.
Ivo vangatokuudza pachena kuti anokufarira - kana iwe uine rombo rakanaka!
9. Anoseka Uye Achinyemwerera
Kana iwe uchiziva kuti majee ako akashata uye iye achiri kungovaseka, ndicho chiratidzo chakanakisa chekuti ane zvaari pamusoro pako.
Kuva padhuze nemukomana watinoda kazhinji kunotipinza mune yakanaka mamiriro uye kunogona kutiita isu kwazvo giggly, saka kunyemwerera uye kuseka kwakanakisa.
Tarisa mazino mahombe ane mazino anoita kuti maziso ake apenye zvakare, uye iwe unoziva iwe uri mune mukana.
10. Anoita Maziso Anotarisana Newe
Mutsika yekumadokero, isu tiri kazhinji zvinotyisa pamusoro pekutarisana nemeso , saka kana tikasangana nemeso emumwe munhu, zvinowanzoitwa nemaune kwazvo.
Kutarisana kwemaziso kunoshamisa kushamwaridzana, saka kana akasangana nemeso ako uye akabata maziso ako, ndicho chiratidzo chakanakisa.
Chii chimwe, kana iwe ona kuti vadzidzi vake vanowedzera kana ndichitaura newe, ndezvimwe zvinoratidza kuti anokufarira.
11. Anonanzva Miromo Yake
Kunanzva miromo chiratidzo chisina kuziva kuti unofarira zvaunoona. Uye isu hatisi kutaura nezve makuru miromo kunanzva mitezo yekunyanyisa kudanana ...
… Tiri kutaura nezve idzo diki, dzakaita sedzinyoka rurimi dzinodzedzerera dzinonyorovesa miromo yedu takagadzirira kutaura kana pamwe kunyangwe kutsvoda.
Dzimwe nguva unogona kutaura kana kuita chimwe chinhu chinoita kuti matama ake aende pink kana kutotsvuka. Uku kutsvuka hakuite nekunyara uye zvakanyanya kuita nekunakidzwa uye kutya.
Kana iwe ukamupfimba uye ukaona iwo matombo matsvuku achirova matama ake, chiratidzo chekuti anogona kunge achivanza manzwiro chaiwo kwauri.
Kana musikana achikuda, iye achazoda kumutaridzika anonyanya kukoshesa chero iwe uripo. Saka iye achatarisa bvudzi rake, obata kumusoro kwekuzora kwake, uye nekugadzirisa mbatya dzake kunzvimbo dzakakodzera.
Anogona kugara achisunga bvudzi rake kuseri kwenzeve yake paunenge uchitaura kana kunyorera zvakare kubwinya kwemuromo panguva yekuzorora yekugezera. Zviratidzo izvi zvinogona kuve zvakavanzika, asi kana ukanyatsocherechedza unokwanisa kuzviona.
14. Muviri Wake Unotendeukira Kwauri
Kana isu tichinyatsofarira izvo zvinotaurwa nemumwe munhu, hatingotarise pavari nemaziso edu, tinotendeudzira muviri wedu wese kwavari.
Kana mapendekete ake akaenzana kwauri, ari kunyatsotarisisa kutarisa kwake pauri.Zvisinei, zvakakoshawo kutarisa tsoka dzake nekuti kana izvi zvikaramba zvakanongedzwa kure newe, anogona kunge achizeza kuita zvizere.
Achave neakavhurika mutauro mutauro unokoka uye unodziya. Iye zvirokwazvo haazove akayambuka maoko. Anogona zvakare kumira akareba zvishoma uye osundira mapendekete ake kumashure kuti aburitse pachena mutsipa wake.
15. Anofamba Padiki padyo
Kana musikana ari mauri, angangotenderera mukati iwe paunenge uchitaura kana kutotora hafu nhanho yakanangana newe kuitira kuti unyatsobatana newe.
yakareba sei hwamanda mwanakomana
Sezvo izvi zvinobudirira zvichisundira miganho yenzvimbo yako wega, chiri chinhu chepedyo kuita. Asi zvinoratidza kufarira pane zvauri kutaura uye nhanho yake yepamusoro yekunyaradzwa zvakakukomberedza.
16. Anonamira Uye / Kana Kudonhedza Musoro Wake
Chimwe chinhu chaangaite asina kana kuziva kuti kutenderedza musoro wake kune rimwe divi zvishoma paunenge uchitaura. Izvi zvinoratidza kufarira uye zvinoratidza kuti ari kugamuchira zvauri kutaura.
Musoro uyu unorerekera unogona kuperekedzwa nekudonha kushoma kwechirebvu chake pasi. Mhedzisiro yacho ndeyekuti kutarisisa kwake kwakatenderedzwa kumusoro kuchiso chako, kuchideredza shaya yake uye kuchimupa iyo yechinyakare mbwanana imbwa ziso rinotaridzika.
Uku kuzviisa pasi zvishoma izvo inoratidza kushomeka uye inokwevera kune hunhu hwekudzivirira hwemurume.
17. Anovhenekera Zviratidzo NeMutauro Wako
Isu vanhu tinoteedzera zvinoitwa nevamwe kana tichida kuvakwezva. Izvi zvinogona kuve pakati peshamwari kana kunyangwe muzvirongwa zvebhizinesi, asi zvinonyanya kuve nemukurumbira mune zvekupfimbana.
Saka kana ukamuona achiratidzira masaini ako, mutauro wemuviri wako, kana zvinhu zvaunotaura, ipfungwa dzake dzisingazive dzichiratidza kukwezva kwako kwauri.
18. Anorangarira Zvinhu Zvaunotaura
Kana achikuda, anogona kunge achiteerera iwe.
Kana iwe wakataura zita rembwa yatete vako kana zuva rekuzvarwa kwemunin'ina wako uye iye achirangarira, ihwohwo humbowo kuti anonamira pazwi rako rega uye anofarira zvepachokwadi izvo zvauri kumuudza, pane kumisikidza.
Usatitongerewo nehasha pane ino nekuti vamwe vedu vane ndangariro dzinotyisa (isu tiri vanhu chete), asi kana akarangarira zvinhu zvidiki zvawataura, anonyatsoda.
19. Achakubvunza Mibvunzo
Kwete chete iye achazoteerera kune zvaunofanira kutaura, iye acherera zvishoma zvakadzama na kukubvunza mibvunzo .
Iye anoda kusvika pakuziva chaiye iwe kuti uone kana uri mukomana zvinhu.
Ari kuyedza kufunga kuti kana paine kubatana ipapo kana, saka gadzirira kune imwe flirty banter inotarisa zvakanyanya pauri.
Uye iye achazoda kuziva nezve chero zvakajairika zvido zvaunogona kugovana uye nezve chero mapfupa akavanda muwadhiropu yako.
20. Iye Anogona Kutaura Nezve Zvimwe Zvemunhu, Zvepamoyo Zvinhu
Zvichida kwete ipapo ipapo, asi apo paunosvika pakuzivana uye uchinzwa wakasununguka kutaura pamusoro pezvinhu, iye anogona kunongedza hurukuro yacho kumatopiki anoratidza mwero wehukama hwehukama kana kusagadzikana.
Izvi zvinogona kuve zviroto zvako, zvaunotya, zvaunotenda, zvaunofarira kana zvasvika kuvana, kana kunyangwe kurwadziwa moyo kana kushungurudzika kubva munguva yake yakapfuura.
Icho chokwadi chekuti ari kukuvhurira chinoratidza kuti arikutora hukama huri kukura zvakanyanya.
21. Anokupa Kutarisisa Kwake Kusina Kukamurwa
Kana imi vaviri muchitaura, achaisa foni yake, osafuratira zvinokanganisa, uye osimbisa simba rake pauri.
Iyi ndiyo nzira yake yekuratidza kuti akaiswa mari mune zvaunofanira kutaura uye kuti mazwi ako anoreva chimwe chinhu kwaari.
Uye haangoteerere kupindura sezvinoita vanhu vazhinji mukutaurirana zvisina kujairika, mhinduro dzake dzinenge dzave kufunga, kuratidza kufarira, uye kuita kuti unzwe uchiteererwa.
Kana mukadzi achida kuti iwe uve nemweya unodziya, unofara kana mese muri pamwe, anogona kukupa rumbidzo kana kutaura zvimwe zvakanaka pamusoro pako.
kurt angle iwe unoyamwa chant
Anogona kutaura zvakanaka nezve izvo zvawakapfeka kana zvimwe zvinhu zvechitarisiko chako. Kana kuti anogona kutaura nezve chimwe chinhu chawakaita chakanyanya kumufadza.
Chero angave mamiriro, kana ari kutaura zvinhu zvine mutsindo nezvako, chiratidzo chakanaka chekuti anoda kuti umude.
23. Anoratidza Kana Kuti Anoratidza Kuti Haana Kuroora
Kana iwe usingazive musikana uye wakangosangana naye kumafaro kana kubhawa kana kuburikidza neshamwari, unogona kunge uchinetseka kuti hukama hwehukama hwake ndewei.
Asi kana iye achikufarira iwe padanho iro mushure mekukuziva iwe zvishoma, mikana ndeyekuti iye awane nzira yekurega kutsvedza kuti parizvino akasununguka uye haana kuroora.
Kana akaunza izvi kumusoro, ndechimwe chezviratidzo zvine simba zvekuti anofarira zvaanoona. Kana asina kudaro, paizove nechikonzero chidiki pakuunza yakadai yega diki kumusoro.
Zvakare, iye achanyatsoteerera maitiro ako kuti uone kana iwe zvakare usina kuroora uye zvaunonzwa manzwiro pamusoro pake ari.
24. Anobata Chinhu Chiri Mumaoko Ake
Ichi chakanyengera zvishoma nekuti mukadzi akabata chinhu mumawoko anogona kureva zvinhu zvakasiyana kwazvo.
Iko kiyi yekuzvifungisisa kunze ndiko kutarisa mabatiro aanoita nekubata nayo. Anoibata-bata kana kuti anoibata zvakasimba? Anotarisa pachinhu zvakanyanya, kana maoko ake ari kufamba asingazivi?
Kana akabata chinwiwa, semuenzaniso, uye zvinyoronyoro uchichimhanyisa uku uchichengeta kumeso kwako, zvinowanzove chiratidzo chekuti akasununguka uye akavhurika kwauri semunhu.
Kana, kune rimwe divi, akabata kabhegi kake nepakati pepakati pake uye achitarisa kure newe zvakanyanya, ari kuyedza kuchengetedza chipingamupinyi pakati pako newe nekuti haafarire, kana nekuti haasati agadzikana zvakakwana kuvapo.
paunoziva kuti hukama hwapera
25. Izvo Zviri Mune Izvo Zvese
Yakawanda yenguva, vasikana vane zvakadzama-zvine tarisiro.
Zviratidzo zvakakura, zvekuratidzira zvine nzvimbo yazvo (hatife takagunun'una kana mukomana akatitsvaira kuenda kuParis pazororo-shoma…), asi kana musikana achida kuratidza kuti anoda mumwe munhu, zvichave kuburikidza nepadiki ruzivo pane chero chinhu chikuru.
Anogona kukubikira kudya kwemanheru anogona kukutengera chimwe chinhu chidiki uye akapusa angaite chimwe chinhu chine kufunga nezvebhavhadhe rako…
Kana akaita chimwe chinhu chinoda kudyarwa kwenguva kwete mari, ari mukati mako chaizvo uye achiedza kuzviratidza.
Tarisa Zviratidzo Zvakadzokororwa
Kucherekedza akati wandei ezviratidzo izvi zvinonyanya kubatsira kana iwe uri kuyedza kufunga kuti musikana anokuda seanopfuura shamwari chete, asi pikicha inokura ichijekesa zvakanyanya paunoona zvinhu izvi zvichidzokororwa.
Mukuzviparadzanisa, zviratidzo izvi zvinogona kuturikirwa zvisizvo sechimwe chinhu kupfuura zvavari. Asi nguva imwe neimwe yaunovaona, iwe unogona kukura mukuvimba zvine chekuita nemanzwiro ake echokwadi kwauri.
Kunge Her Back?
Kana iye ari kukupa iwe zvese zvakanaka zviratidzo, iwe unofanirwa kudzosera kuti uve nechokwadi chekuti anoziva kuti haasi iye oga mune izvi. Iye achange achinyatsokutarisa padhuze nezviratidzo, sezvauri iye.
Kumubata, kunyemwerera, kuseka majee ake, uye - izvi zvakakosha zvikuru - muudze kuti unomuda (pasina kunzwa kusanzwisisika) <<– click this link to learn how best to do this.
Hapana munhu anoda kusaina rudo rusingadzokwi , uye kunyangwe kana ari kutanga kukuda, anonyatsoda kurudziro asati azvirega achiwira pasi nezvitsitsinho.
Kana iwe uine chokwadi chekuti musikana uyu anokuda, asi iwe usina chokwadi chekuita zvinotevera, wadii kutaurirana online kune wekufambidzana nyanzvi kubva kuRelationship Gamba? Simply.
12 Signs Uri Kufambidzana A Beta Male (Uye Nei Icho Chinhu Chakanaka Chinhu)
7 Mibvunzo Yekubvunza Kuti Usvike Chaizvo Kuziva Mumwe Munhu
10 Hukama Mibvunzo UNOFANIRA Bvunza Izvo Zvinhu Zvisati Zvanyanyisa Kukomba
Unoziva Sei Kana Iwe Uri Murudo? 10 Zviratidzo Zvechokwadi Ndezvechokwadi.
sei kuudza kana achikuda
katatu h vs brock lesnar
gehena remadzimai muchitokisi
iro dombo richava pawrestlemania 33
kumirira mukomana asingazive zvaari kuda
unogona here kuva nehukama pamweya nemumwe munhu